नेपालमा शान्ति स्थापना हुन् नसक्नुको प्रमुख कारण के होला?
नेपाल, वीर गोर्खालीको देश , सगरमाथाको देश अनि शान्तिका अग्रदुत भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जन्मिएको देश । शान्ति क्षेत्रको रुपमा केहिवर्ष अघि सम्म संसारभरि नाम कमाएको देश । भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जन्मेको शान्तिको देश नेपालको नागरिक हु भनि अरु सामु आफ्नो परिचय दिन पाउदा हरेक नेपालीको छाती गर्वले ढक्क फुल्लिन्थ्यो ।
तर खोइ कसको आखाँ लाग्यो स्वर्गजस्तो हाम्रो देशमा अनि खोइ कता हरायो शान्ति पनि ? शान्ति हराउनुमा वा नेपालमा दीगो शान्ति स्थापना हुन् नसक्नुमा प्रमुख कारण के होला भनेर सोध्ने हो भने हरेक नेपालीको फरक फरक विचार होला । यसै प्रश्नको सेरोफेरोमा रही नेपाली जनमानसमा उब्जिएको एउटा साझा सवाल “ नेपालमा शान्ति स्थापना हुन् नसक्नुको प्रमुख कारण के होला? ” लाई यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गरेका थियौ । जसमा यहाँहरुले भोटको मध्यमद्वारा व्यक्त गर्नुभएको अभिमतको लागी हृदय देखिनै साधुवाद व्यक्त गर्दछौ । उक्त प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसप्रकार रहेको छ :....